Dear Thuli Madonsela: Awuseyena phela uMvikeli woMphakathi sisi | News24
Dear Thuli Madonsela: Awuseyena phela uMvikeli woMphakathi sisi
Durban - Lowo owayenguMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, akehlukane phela noMengameli uJacob Zuma manje njengoba esephumile kuleli hhovisi.
UMadonsela, njengomuntu esimhloniphayo ngemisebenzi yakhe emihle ayenzele isizwe, akakuqonde phela ukuthi ihhovisi likaMvikeli woMphakathi seliphethwe omunye umuntu manje, uBusisiwe Mkhwebane.
Kuzokhumbuleka ukuthi uThuli Madonsela upotshozele abezindaba inkulumo yakhe noMengameli, yangesikhathi kuphenywa ngomthelela wobudlelwane bomndeni wakwaGupta noZuma kanye nezinye izikhulu ekuthathweni kwezinqumo ezithile kuhulumeni noma ezinkampanini zikahulumeni.
Uma uMadonsela uma ekholelwa ukuthi uZuma uqamba amanga ngokwenzeka esanguMvikeli woMphakathi, akaye enkantolo phela ammangalele ukuze kugezwe igama lakhe, hhayi ukutsheka abezindaba nobhululu bakhe.
Ngikholelwa ukuthi izinto zalapho owawusebenza khona awube usazisebenzise noma nje ngingathi uyehlukana nazo uma ungasasebenzi khona, owawukwenza lapho kusuke kungasewona umsebenzi wakho uma usuhambile.
Phela asikakhohlwa ukuthi ngesikhathi uMadonsela esanguMvikeli woMphakathi kunemibiko eyaputshuka kwagcina kungavelanga ukuthi iputshuzwe obani.
OLUNYE UDABA: Niyakuqabuka yini okwenzeka kwaShembe?
Ukuqhubeka kwakhe uMadonsela nokukhuluma ngoZuma kwabezindaba kuzokwenza siyingabaze imibiko yakhe emayelana noMengameli Zuma, ngoba phela kuzoba sengathi wayesebenza enenzondo ngoMengameli.
Omunye wabaphenyi bezinye zezinhlelo kumabonakude wake wathi inkinga eyenziwa abantu abangabaseshi noma amaphoyisa ukuthi uma bephenya benokuthile abakholelwa kukhona ngecala, bafuna ukwamukela kuphela ubufakazi obuhambisana nalokho abakholelwa kukhona, ngendlela yokuthi uma kuvela ubufakazi obehlukile babushaya indiva.
Angisho ukuthi kunjalo ngoMadonsela kodwa ngithi okwenzeka esanguMvikeli woMphakathi kumele kusale khona, baqhubeke nomsebenzi abasele khona.
Sisi Thuli sicela uma kukhona ongeneme ngakho, okushiwo uZuma, ungathathi ngenhliziyo kodwa enza izinto ngendlela ezokwenza siqhubeke nokukuhlonipha, hhayi indaba yokupotshezela abezindaba.